China SEBIC 20 inch Motorized Fat Fat 500w Electric Bike Motorcycle ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Funncycle
SEBIC 20 nke anụ ọhịa Motorized Fat Fat 500w Electric Bike Motorcycle
Low mmezi na nkenke anya. Na igwe eletriki eletrik na-arụ nke ọma site na iji ntọala siri ike ma sie ike na etiti, nwere ike ịkwado oke ibu nke 100KG. N'ihu ihu na ihu abụọ nke ọkụ na-eduga na nnukwu nchebe mmiri na-eme ka ọnọdụ ọ bụla dị mma.
Moto Brushless, Mag Wheel 500W / 750W
Ụba 20 * 490MM, Aluminom Alloy
Ndụdụ 20 ″ Alloy ndụdụ, nkwusioru
Breeki Ugboro abụọ Diski breeki
Taya 20 * 4.0
Gear Ntọala otu ọsọ
Batrị Batrị Lithium 48V
Ngosipụta Ngosipụta LCD
SỌPOWROW IKE, SỌP COO- Integrated wheel imewe nke bụ ala mmezi na nkenke anya. Na igwe eletriki eletrik na-arụ nke ọma site na iji ntọala siri ike ma sie ike na etiti, nwere ike ịkwado oke ibu nke 100KG. N'ihu ihu na ihu abụọ nke ọkụ na-eduga na nnukwu nchebe mmiri na-eme ka ọnọdụ ọ bụla dị mma.
Ngwa ngwa & Ọsọ- 500W-1200W gosiri ike igwe na-enye ya ohere ịdị ngwa ma gbagoo ọfụma. Batrị 48V 17.5Ah Li-ion na-eweta oke ọsọ nke 21 MPH na oke njem dị oke ruo kilomita 50 mgbe otu ụgwọ zuru ezu.
Obi iru ala & nchedo- Otu ihe nkpuchi nke hydraulic diski na nkwụsị aka nke ndị na-ejide aka ga-akwụsị ma ọ bụ kwụsị gị n'oge ọ bụla, yana nnukwu oche dị mma, n'ihu & azụ azụ ọkụ zuru oke, nkwonkwo nkwonkwo siri ike, oghere na mgbochi 20 × Igwe anụ ọhịa nke 4.0 nke na-enye traction siri ike na nkwụsi ike, njem ahụ dị mma ma na-atọ ụtọ. Front Light dị jụụ na elu lux, N'azụ breeki ìhè ka ị na-agba ịnyịnya ọzọ odi mfe.
AKWADEKWỌ AKWESSKWỌ AKWESSKWỌ - Ewezuga igwe eletrik, ịnwere ike ịhọrọ ịgbakwunye ụgbọelu azụ nke nwere ike iburu akpa gị na bọọdụ ụkwụ azụ iji kpọta ndị mmadụ.
Nke gara aga: Ego Ego Dị ọnụ ala Electric Bike - SEBIC enduro mid n'ịnyịnya moto ụzọ ebikes - Funncycle
Osote: SEBIC ọgba tum tum New Style Central Suspension 16 Inch Comfortable One Wheel Electric Bike
Igwe ugbo ala 26
Ebe a na-anya ụgbọ mmiri Cruiser
Igwe eletriki igwe kwụ otu ebe